Na an-tsesitany aza, mbola mitoetra anatin’ny pôlitika bôliviàna ny dindon’i Evo Morales · Global Voices teny Malagasy
Indizeny filoha teo aloha tsy mahazo mirotsaka ho loholona
Mpanoratra Melissa Vida, Fabiola Gutiérrez Nandika (en) i Teodora C. Hasegan, avylavitra
Voadika ny 27 Avrily 2020 16:54 GMT
Evo Morales. Sary tao amin'ny Wikimedia Commons.
Ny 18 Janoary 2020, taitra nandre feo tsy zoviana aminy ireo olona marobe nanatrika ny fanokanana ny Ivontoerena Teknôlojika Yacumo tao avaratra andrefan'i Bôlivia.
Tamin'ny alàlan'ny mikrô napetraka teo akaikin'ny tefefaona, nilaza ny filoha teo aloha Evo Morales, miaina an-tsesitany efa hatramin'ny Novambra 2019 fa:
Tena malahelo mafy aho amin'ny zavatra rehetra nitranga, saingy tiako ny milaza am-panajàna aminareo fa adidintsika ny mitambatra sy mamerina indray ny dingan'ny fanavoazana nataontsika.
Tsy tamin'io no sambany nisehoan'ny filoha teo aloha taminà asa fitokanana nampandalovina tamin'ny telefaona. Ny Desambra 2019, ny lefitry ny governoran'i Entre Ríos, Wálter Ferrufino niantso an-telafaona an'i Morales nandritra ny lanonam-panokafana ny tsena iray tao amin'ny faritra. Herinandro vitsy taty aoriana, voatazona nandritra ny ora efatra tao amin'ny seranampiaramanidina bôliviàna iray i Ferrufino raha teny an-dàlana ho any Arzantina, toerana tokony hanatrehany fihaonana iray iarahana amin'i Morales sy ny antokony “Hetsika ho an'ny Sôsialisla (MAS)”.
Miantso indray an-telefaona an'i Evo Morales ny vahoaka bôliviàna mba hahafahany mitokana tetikasa iray. Talohan'izao izy dia nandray anjara tamin'ny fitokanana tetikasa iray tao amin'ny faritanin'i Oconnor, ary izay no antony nitazonana ny lefitry ny governora. Amin'ity indray mitoraka ity dia any amin'ny departemantan'i Beni no misy ilay tetikasa.
Ireo antso roa an-telefaona ireo dia samy manamarina ny dindon'i Morales mbola mitoetra ao anatin'ny pôlitika bôliviàna na dia any an-tsesitany aza izy hatramin'ny nametrahany fialàna noho ny tsindry nataon'ny tafika tamin'ny Novambra 2019.
Tamin'ny 2006 i Morales no lasa ilay filoham-pirenena indizeny voalohany indrindra tao Bôlivia — firenena iray izay maherin'ny 40 isanjatony no manana fiaviana indizeny. Ny Novambra tamin'ny taona lasa, nandresy tamin'ny fifidianana fahatelo natrehany izy, taminà vato izay nolazain'ireo mpanaramaso iraisampirenena fa hosoka. Nipongatra ireo hetsipanoherana an'i Morales ary, herinandro dimy taorian'izay, ny tafika no “nanoro hevitra” an'i Morales hametraka fialàna — tranga iray izay hitan'i Morales sy ireo mpanohana azy ho toy ny fanonganam-panjakana. Nipoaka ny onjanà fametrahana fialàna teo anivon'ny antokony.
Tamin'ny Desambra, ny fampanoavana tao Bôlivia dia namoaka didy fampisamborana an'i Morales, noho ny vesatra “fampisaraham-bazana sy fampihorohoroana” taorian'ny filazàna fa nandrahonany hanao “fahirano tanàna vitsivitsy” tao anatin'ireo fanoherana ny fahalaniany indray.
Taorian'ny fahabangan-toerana teo amin'ny fitondrana, nialàn'ny MAS, nitodika tany amin'i Jeanine Añez, mpanao lalàna no sady mpanohitra avy amin'ny elatra havanana no sady filoha lefitry ny antenimieran-doholona, ny ho fanoloana ny filohampirenena. Hatramin'ny nahatongavan-dramatoa io teo amin'ny toeran'ny filoha vonjimaika, nampangaina ho nanao fanavakavahana an'ireo vahoaka indizeny izy, sy ho nitarika an'i Bôlivia hiditra anaty “fitantanana mahery setra eo ambanin'ny elatra havanana” miaraka aminà fijery kristianana hiringiriny.
Ny 3 May no voalahatra hatao ny fifidianana manaraka. Mpirotsaka ho filohampirenena avy amin'ny MAS i Luis Arce, minisitry ny toekarena fony faha-Morales. Mpifaninana ihany koa amin'ny MAS ry Carlos Mesa sy Jorge Quiroga, izay nitondra an'i Bôlivia teo anelanelan'ny 2001 sy 2005, hatramin'i Añez. Ny 6 Aogositra no hanao ny fianianany izay filoha ho lany eo, andro ankalazan'i Bôlivia ny fahaleovantenany.
Morales, izay tamin'ny voalohany dia nitady ny hialokaloka tany Meksika talohan'ny nipetrahany tao Arzantina iray volana taorian'izay, dia nampangain'ny filoha meksikàna teo aloha, Felipe Calderon sy ny filoha vonjimaika ao Bôlivia, Jeanine Añez ho nanitsakitsaha ny Fifanarahan'i Montevideo momba ny Fialokalofana, izay milaza fa “ireo rehetra mangataka fialokalofana dia tsy omena alàlana (…) handray anjara na hamela dindo aminà hetsika pôlitika.”
Kanefa, na i Bôlivia na i Meksika dia samy nanao sonia ilay fifanarahana, araka ny nambaran'ny sekreteran'ny atitany ao Meksika, Olga Sánchez Cordero, ary i Meksika, teo ambany fitarihan'ny governemantan'ny filoha avy amin'ny hery ankavia, Andrés Manuel Lopez Obrador, dia niaro ny zon'i Morales ho “afaka maneho hevitra an-kalalahana.” Nanomboka ny Novambra, niharatsy ny fifandraisan'i Bôlivia tamin'i Meksika sy Argentina.
Yerko Nuñez, tànan-kavanan'i Añez, nihevitra ilay antso an-telefaona nataon'i Morales nandritra ilay fotoana fitokanana ho toy ny “mahasorena”, “sangy ratsy” ary “fisandohana andraikitra”.
Sangy ratsy, no sady fihetsika mahasorena, ny mandre ny filoha teo aloha manao fitokanana tetikasa amin'ny alàlan'ny antso an-telefaona. Fisandohana andraikitra fotsiny no nataonao ary manampy ny lisitr'ireo heloka bevava tsy maintsy hovalianao eo anatrehan'ny fitsaràna #boliviàna.
- Yerko Núñez Negrette (@yerko_nunez) 27 Desambra 2019
Notadiavin'i Morales ny hisoratra anarana ho mpirotsaka ho fidiana ao amin'ny Antenimieran-doholona amin'ny fifidianana hoavy ny 3 May 2020, saingy nolavin'ny Fitsaràm-Pifidianana ao Bôlivia ny firotsahany, tamin'ny filazàna fa tsy fenony ny fitakiana fananana toerana fonenana raikitra ao Bôlivia.
Fifandraisana avy lavitra
Araka ny fandalinana nivoaka tao amin'ny “World Politics Review” nataon'ilay mpikirakira Frida Ghitis, i Morales no atidoha tao ambadiky ny fandrotsahana an'i Luis Arce, ilay minisitry ny toekarena teo aloha izay hisolo tena ny MAS amin'ny fifidianana ho filohampirenena ho avy eo.
Arce, izay nahazo fialokalofana pôlitika ao Meksika sy Arzantina miaraka amin'i Evo, ary iharan'ny fanadihadiana noho ny resaka kolikoly nataon'ilay governemanta vonjimaika, dia niverina tao Bôlivia tamin'ny 28 Janoary 2020. Nisy diabe fanohanana azy natao tao La Paz ny 3 Febroary rehefa neken'ny Tribonaly Faratampony misahana ny Fifidianana ny firotsahany sy ny an'i David Choquehuanca (ity farany ho amin'ny toeran'ny filoha lefitra).
i Choquehuanca, izay indizeny, no safidin'ireo mpitarika sasantsasany ao amin'ny MAS hihazakazaka ho amin'ny toeran'ny filoha, fa tsy i Arce. Esperanza Calle, mpanao gazety iray ho an'ny El Alteño, miteny fa toa tsy ankasitrahan'i Morales ny hisian'ny mpitarika indizeny iray hafa “hanaloka azy”:
Niteraka kiana maro avy amin'ireo mpitarika ilay fanapahankevitra noraisin'i Evo, ireo mpitarika izay nanohana hatrany ny MAS sy ny pôlitikan'ny governemanta amperinasa. Ny sasany mamaritra ny fihetsiny ho toy ny “famadihana ireo fikambanana sôsialy” raha ny hafa indray mahita izany ho toy ny “fidedahana / fireharehàna” satria tsy tian'ilay tompon'ny fahefana fahiny hisy na iza na iza “hanaloka” ny sata maha-indizeny azy.
Ny Janoary, niteraka hatezerana i Morales taorian'ny nilazàny fa “raha tafaverina aho (…) tsy maintsy mametraka rindra isika, toy ny milisim-bahoaka mitam-piadiana ao Venezoelà.” Nosintoniny ny antsony, andro telo taty aoriana.
Taorian'ny fanambaràna nataon'i Morales momba ny fikasàny hiverina ao Bôlivia, nolazain'i Arturo Murillo, minisitry ny atitany ao anatin'ny governemanta vonjimaika ao Bôlivia fa Evo Morales “dia manana efitrano misoratra amin'ny anarany” ao amin'ny fonjan'i San Pedro de Chonchocoro ao La Paz.
Hoy ilay mpikirakira ara-politika Ghitis:
Miaraka amin'ny datim-pifidianana efa voalahatra sahady, sy ireo antoko pôlitika efa misafidy izay ho olona atolony, manahirana an'i Morales ny mihazona ny dindony.